Hariiroon Eertiraa fi Masrii cimaa dhufuun Itoophiyaa yaachisuu hin qabu jetti Eertiraan - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Hariiroon Eertiraa fi Masrii cimaa dhufuun Itoophiyaa yaachisuu hin qabu jetti Eertiraan
Hariiroon Eertiraa fi Masrii cimaa dhufuun Itoophiyaa yaachisuu hin qabu jetti Eertiraan
By Abdii F Sabaa
Hariiroon Eertiraa fi Masrii cimaa dhufuun mootumma Itoophiyaaf madda bowwoo guddaa ta’aa dhufeera. Keessattuu, mootummana Isaayyaas Kaayiroon buufata woraanaa Eertiratti akka tolfattuuf hayyamuun isaa fedhii fi karoorri biyyoota kanaa maal akka ta’e Itoophiyaan gaafataa fi tilmaamaa akka jiraattuuf dirqisiiseera.
Itoophiyaaf sochiin biyyoonni lamaan eegalan qophii fi tattaafii hidhaa Abbayyaa gufachiisuuti. Gama biraan, mootummaan Itoophiyaa Eertiraa fi Masriin humnoota mormitootaa leenjisaa fi gargaara natti erga jechuudhaan yeroo addaddaatti himannaa biyyoota lamaan irratti banaa turteerti. Biyyoonni lamaan yeroo kanatti hariiroo qaban cimsuu fi waraannii Masrii Eertiraa keessatti akka maandheffatu taasisuun mootummaa Itoophiyaaf ergaa cimaa dabarsuudha kanniin jedhan heddu.
Eertiraan kan jettu, gama isiitiin, michummaana Masrii waliin eegalame dhimma Abbayyaan wanti walittii hidhat qabu hin jiru. Itoophiyaan akkasumaan jeeqamu akka hin qabne ibsa ibsi Ministera Odeeffannoo mootummaa Eertiraa.
Masriin Itoophiyaan laga Abbayyaa hidhuun kan isii yaachisuu fi dantaa isii tuqu ta’uu yeroo dheeraadhaaf dubbataa turte. Garuu, rakkoo jiru karaa nagaan hiikuu malee humnatti fayyadamuun tarsiimoo isii akka hin taane hubachiisti. Kanaaf, michummaan amma Eertiraa waliin eegalames dhimma Abbayyaan walitti hidhata hin qabu jetti.
Barreessaa karaa [email protected] qunnammaa
hariiro eertiraa fi masrii
sochii gaafa afrikaa
Previous articleOMN dogoggora ABO irraa barachuu qaba
Next articleDr. Tediroos Adhaanoom hoogganaa WHO ta’ee filatamuun xiyyeeffannaan mirga namaaf laatamu xiqqaa ta’uu agarsiisa